Xarunta dhaqamada kala duwan ee Norway
Waxaan ku noolnahay bulsho dhaqamo badan sii kordheysa. Kooxda ka socota Xarunta Dhaqanka ee Norway (NOMKUS) waxay jecel yihiin dhaqanka!
Xarunta dhaqamada kala duwan ee Norway waa koox dhaqamo kala duwan leh oo bixiya koorsooyin, waxbarid online ah, seminaaro, muxaadarooyin iyo adeegyo turjubaan, oo leh isdhexgalka goob ahaan.
Aragtida iyo Qiimaha
Nala shaqeyso oo isbedel samee
Anagoo adeegsanayna xarunta dhaqamada kala duwan ee Norway, waxaan, ku dhawaad 80 qof, rabnaa inaan muujino dhanka wanaagsan ee kala duwanaanshaha. Shaqadeenu waxay soo jiidataa xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay, iyo marka loo eego qiyamkayaga guud ee sinnaanta, dareenka iyo ixtiraamka.
Waxaan rabnaa inaan noqono goob kulan oo dhista buundooyinka isku xira deegaanka kala duwan, matalana sawirka dhabta ah ee doodda socdaalka: Dad saaxiibo ah oo daacad ah oo kheyraad weyn u ah dalkeena, caawiya kuwa cusub oo isku mid ah, iyadoon loo eegin mawqifyada siyaasadeed , diinta, qoomiyadda, iyo wixii la mid ah.
KU SAABSAN AASAASKII
Waxaan ku dhashay Norway, kuna koray Kvinesdal. Tan iyo 2001, waxaan ku faraxsanahay inaan helo shaqo aan kula kulmi karo dad cusub oo dalkeena yimaada. Waxaan u shaqeeyay sidii maareeyaha soo dhawaynta, la taliyaha soo noqoshada, macluumaadka iyo maareeyaha dejinta iwm.
Intii u dhaxaysay 2011-2013, waxa aan nasiib u yeeshay in aan ka mid noqdo barnaamijka la-talinta Innovation Norway ee bilawga ganacsiga, Kvinnovasjon Sørlandet iyo 20 kale oo haween ah oo hal-abuur ganacsi oo Agder ah, oo ay weheliso daraasad ku saabsan Hagidda Xirfadda ee ku aaddan samaynta shirkad aad adigu leedahay. Laga soo bilaabo shirkado gaar ah, ilaa Melinda Gateway AS, ilaa Norges Multikulturelle Senter AS. Dhammaan waxay ku saabsan tahay is-dhexgalka, iyo ka caawinta dadka cusub ee waddankeenna ku cusub inay helaan meel wanaagsan oo ay halkan ka tirsan yihiin.
Nomkus, waxaan ka shaqeeyaa sidii maamule guud. Shaqadaydu waxay inta badan ku saabsan tahay abaabulka iyo faafinta aqoonta xirfadeed ee gaarka ah iyo khibradda shaqaalaheennu. Haddii kale, waxaan leeyahay mas'uuliyadda guud ee hawl-maalmeedka, shaqaalaha, HSE oo waxaan ahay qofka la xidhiidha taageerayaasheena, lammaanayaashayada, macaamiishayada iyo macaamiishayada.
Anigoo ah siyaasigii hore ee degmada iyo gobolka, waxaan ogahay sida ay muhiim ugu tahay bulshada in aan awoodno in aan ka faa'ideyno kartida iyo waayo-aragnimada dadka magangalyo-doonka iyo qaxootiga ah ee waddankeena ku yimaada. Aniga oo hore u ahaan jiray soo dhawaynta, waxaan ogahay sida ay muhiim u tahay dadka halkan yimaada inay wax ku darsadaan oo ay aqoonsi u helaan dedaalkooda. Dhaqamada kala duwan ee Noorway waxay u noqon kartaa kheyraad lama filaan ah dalkeena.
Buuxi foomka si aad fariin noogu soo dirto
Si degdeg ah ayaan ugu jawaabnay